नर्भिकमा शनिबार निशुल्क ओपिडी हुने- बजार - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलको नि:शुल्क ओपिडी अभियानअन्तर्गत शनिबार(भोलि) कन्सलट्यान्ट फिजिसियन तथा कार्डियोलोजिष्टको नि:शुल्क सेवा संचालन हुने भएको छ ।
नर्भिक अस्पतालमा कार्यरत कन्सलट्यान्ट फिजिसियन तथा कार्डियोलोजिष्ट डा. शैलेन्द्रप्रसाद कुशवाहाले नि:शुल्क ओपिडी सेवा दिन लागेका हुन् । डा. कुशवाहाले बिहान १० बजेदेखि मध्यान्ह १२ बजेसम्म बिरामीहरुका लागि नि:शुल्क सेवा दिनेछन् ।
मुटुसँग सम्बन्धित समस्या भएका र अन्य शारिरीक अस्वस्थ्यता भएकाहरु समेत डा. कुशवाहाको नि:शुल्क ओपिडीबाट लाभान्वित हुन सक्नेछन् । नर्भिकले केही महिनाअघिदेखि आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत प्रत्येक शनिबार कुनै न कुनै विशेषज्ञ चिकित्सकलाई निशुल्क ओपिडी सेवाका लागि प्रस्तुत गर्ने गरेको छ । नि:शुल्क ओपिडी सेवा लिनका लागि नर्भिक अस्पतालको कल सेन्टरमा फोन गरेर आफ्नो नाम टिपाउन सकिनेछ ।
प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७८ १९:०४
काठमाडौँ — रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले ‘रिलायन्स वार्षिक धन वर्षा जीवन बीमा योजना’ सार्वजनिक गरेको छ ।
सो बीमा योजनाअन्तर्गत बीमितलाई प्रत्येक वर्ष बीमालेखको वार्षिकोत्सव मितिमा बीमाङ्कको ५ प्रतिशत रकम भुक्तान गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
यो योजना बीमितले १५ वा २० वर्षको अवधिका लागि लिन सक्नेछन् । १५ वर्षको बीमा अवधिको समाप्तिमा बीमितलाई अग्रिम वार्षिक रुपमा भुक्तानी गरिएको रकम घटाई बाँकी रहेको बीमाङ्क रकम र आर्जित बोनस प्रदान गरिनेछ भने २० वर्षको बीमा अवधिको समाप्तिमा अग्रिम वार्षिक रुपमा भुक्तान गरिएको रकम घटाई बाँकी बीमाङ्क रकम, आर्जित बोनस र बीमाङ्क रकमको १० प्रतिशत थप रकम (एक पटकको लागि मात्र) प्रदान गरिने छ । यस योजनामा कथंकदाचित बीमा अवधिमा बीमितको मृत्यु भएमा इच्छाइएको व्यक्तिलाई बीमाङ्क रकम र आर्जित बोनस प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
यो योजना १८ देखि ५५ वर्ष उमेरका ग्राहकले लिन सक्नेछन् । यो योजनाअन्तर्गत न्यूनतम बीमाङ्क रकम १ लाख कायम गरिएको छ।
प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७८ १८:५६